Vaovao - Condenser evaporative
Ny condenser etona dia mihatsara kokoa avy amin'ny tilikambo mangatsiaka. Ny fitsipiky ny fiasan'izy io dia mitovy amin'ny an'ny tilikambo mangatsiaka. Izy io dia mifangaro indrindra amin'ny exchanger hafanana, ny rafi-pandehanan'ny rano ary ny rafitra mpankafy. Ny condenser evaporative dia mifototra amin'ny conduction evaporative sy ny fifanakalozana hafanana sensible. Ny rafitra fizarana rano eo an-tampon'ny condenser dia manaparitaka rano mihena hatrany hatrany mba hamoronana sarimihetsika rano eo ambonin'ny fantsom-pifanakalozana hafanana, ny fifanakalozana hafanana azo tsapain-tanana dia misy eo anelanelan'ny fantsom-pifanakalozana hafanana sy ny tsiranoka mafana ao anaty fantsona, ary ny hafanana dia afindra amin'ny rano mangatsiaka ivelan'ny fantsona. Mandritra izany fotoana izany, ny rano mangatsiaka ivelan'ny fantsom-pifanakalozana hafanana dia afangaro amin'ny rivotra, ary ny rano mangatsiaka dia mamoaka ny hafanana miafina ny etona (ny fomba lehibe indrindra amin'ny fifanakalozana hafanana) mankany amin'ny rivotra mba hampangatsiaka, ka ny hafanan'ny kondensation an'ny ny tsiranoka dia manakaiky kokoa ny mari-pana amin'ny labo mando amin'ny rivotra, ary ny mari-panafony dia mety 3-5 ℃ ambany kokoa noho ny an'ny rafitra fanamafisam-peo vita amin'ny tilikambo misy rano.
1. Voka-dratsin'ny fihenan-tsakafo: hafanana lehibe miafina an'ny etona, famindrana hafanana avo lenta amin'ny fikorianan'ny rivotra sy ny vata fampangatsiahana, ny condenser evaporative dia mandray ny mari-pana mandroana mando toy ny hery manosika, mampiasa ny hafanana miafina ny etona misy ny sarimihetsika rano amin'ny coil mba hanaovana ny mari-panafom-panafody manakaiky ny mari-pana takamoa, ary ny mari-panafony dia mety 3-5 ℃ ambany noho ny an'ny rafitra fanamafisam-peo vita amin'ny tilikambo fihenan'ny rano ary 8-11 ℃ ambany noho ny an'ny rafitra condenser milay, izay mampihena be ny fanjifana herinaratra amin'ny compressor, Ny tahan'ny fahombiazan'ny angovo ao amin'ny rafitra dia nitombo 10% -30%.
2. Fanangonan-drano: ny hafanana miafina ao anaty rano dia ampiasaina amin'ny fifanakalozana hafanana, ary kely ny fanjifana rano mivezivezy. Raha jerena ny fisondrotan'ny fatiantoka sy ny fifanakalozana rano maloto dia tsy 5% -10% amin'ny fampiasa amin'ny rano matetika ny fanjifana rano.
3. Mitsitsy angovo
Ny hafanan'ny condenser an'ny condenser etona dia voafetran'ny hafanan'ny rivotra mando, ary ny mari-pana umam-bovoka amin'ny ankapobeny dia 8-14 ℃ ambany noho ny mari-pana maina. Miaraka amin'ny tontolon'ny tsindry ratsy ateraky ny mpankafy ambony, ambany ny mari-pana mifehy, ka ambany ny tahan'ny fampiasana herinaratra ho an'ny compressor, ary ambany ny fanjifana herinaratra an'ny paompy sy paompin-drano fanondranana. Raha ampitahaina amin'ny condenser hafa, ny condenser etona dia afaka mamonjy angovo 20% - 40%.
4. Vola fampiasam-bola sy fiasa voalohany ambany: ny condenser etona dia manana rafitra matevina, tsy mila tilikambo fanamainana, mitana faritra kely ary mora mamorona iray manontolo mandritra ny famokarana, izay mitondra fahafaha-manao amin'ny fametrahana sy fikojakojana.